First Mercure debuts in Myanmar – LYCA COMMUNICATIONS
Yangon – May 7, 2018 – AccorHotels announced the official opening of its first Mercure property in Yangon’s prime district. Managed by AccorHotels, the seven-storey Mercure Yangon Kaba Aye features 183 spacious rooms and suites ideal for families and long-staying guests.
Mercure Yangon Kaba Aye is located along Kaba Aye Pagoda Road just 10 km from Yangon International Airport andashort drive from the University of Yangon. Featuring high ceilings and generous floor spaces of 32 sqm to 125 sqm, the guestroom décor draws inspiration from local Myanmar culture and craftsmanship and includes traditional lacquerware. The rooms offer views of swimming pool or landscaped gardens, while suites on the higher floors overlook the panoramic view of the city’s lush greenery. The suites also come withafully equipped kitchenette andaseparate lounge and dining room.
As part of the property’s extensive renovation, the newly remodelled MiCasa Restaurant & Bar offers guests all-day dining options from generous buffet breakfasts to evening cocktails and an à la carte selection with delectable local and international flavours. The chic and modern design of the restaurant providesarefreshing space for up to 200 for guests to dine, relax or simply enjoy the new bar overlooking the swimming pool. For meetings, conferences, cocktail parties and weddings, the newly remodelled function spaces can accommodate up to 210 guests. The hotel also featuresa‘Ready to Work’ space for business travellers working on-the-go, from single seats on an hourly basis toamonthly office rental for up to six people.
To refresh and re-energise, the hotel’s Sweat Club featuresastate-of-the-art fitness facility and daily aerobics classes. To cool off the evening, the 21-metre lap pool providesarefreshing escape from the city, while the adjacent pool bar offersaselection of light bites and cocktails. Onsite babysitting services are also available for families with young children.
Mercure Yangon Kaba Aye is located along Kaba Aye Pagoda Road just 10 km from Yangon International Airport as well as central business district and key tourist sites and close toapopular Myanmar Plaza Shopping Mall. For more information, please visit http://www.mercureyangonkabaaye.com.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး Mercure ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်၊ မေလ (၇)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – AccorHotels အဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့တော်၏ စီးပွားရေး အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်သော ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းမပေါ်၌ ၎င်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး Mercure အမှတ်တံဆိပ် ဟိုတယ်ကို တရားဝင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလက် သည်။ AccorHotels အဖွဲ့မှ စီမံကွပ်ကဲသော Mercure Yangon Kaba Aye သည် အထပ်ပေါင်း (၇) ထပ်ရှိပြီး မိသားစုများနှင့် ရက်ရှည်တည်းခို နေထိုင်မည့် ဧည့်သည်များ အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ် စေရန် အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းရရှိ၍ ကျယ်ဝန်းသော အထူးကောင်းမွန်သည့် အခန်းများနှင့် suite အခန်းပေါင်း (၁၈၃) ခန်း ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Mercure Yangon Kaba Aye ဟိုတယ်သည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ၁၀ ကီလိုမီတာ ခန့်အကွာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကွာဝေးသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ လှပ ခမ်းနား၍ မြင့်မားသော မျက်နှာကျက်ကြီးများ၊ (၃၂) စတုရန်းမီတာမှ (၁၂၅) စတုရန်းမီတာအထိ ကျယ် ဝန်းသော ကြမ်းခင်းကြီးများဖြင့် အလှဆင်ဖွဲ့စည်းထားသော တည်းခိုခန်းများ၏ အခန်းတွင်း အပြင် အဆင်သည် ပြည်တွင်းမြန်မာ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ၊ လက်မှုပညာနှင့် ရိုးရာယွန်းထည်ပစ္စည်း များ၏ အနှစ်သာရကို မီငြမ်းထားခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အခန်းတစ်ခန်းစီမှ ရေကူးကန် (သို့မဟုတ်) မြို့ရှုခင်း မြင်ကွင်းကို ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အထပ်မြင့်အခန်းများတွင်တော့ ရန်ကုန်မြို့တစ်ခွင်မှ စိမ်းစိမ်းစိုစို ရှိ သော မြင်ကွင်းများ၊ ရှုခင်းများကို မြင်ကွင်းကျယ် တဝကြီး ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ suite အခန်းများတွင်မူ ပစ္စည်းအစုံအလင်ပါရှိသော မီးဖိုချောင်၊ သီးသန့်နားနေရာဧည့်ခန်းနှင့် ထမင်းစားခန်း စသည် တ ည်း ပါရှိပါသည်။
“အခုပထမဆုံး ဒီMercure Yangon Kaba Aye Hotel က ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဟာ အရှိန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် နေတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ မျှော်မှန်းချက်ကို အခြေပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းဒေသရဲ့ ပန်းဥယျာဉ်မြို့တော်တစ်ခု လို့တင်စားကြတဲ့အတိုင်း ဒီရန်ကုန်မြို့က မတူကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေ ရောယှက်ဆုံစည်း ရာနေရာတစ်ခုပါပဲ” ဟု အရှေ့တောင်နှင့် အရှေ့မြောက်အာရှ AccorHotels ရဲ့ Chief Operating Officer ဖြစ်သူ Patrick Basset မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟိုတယ် အဆောက်အအုံကြီးကို ပြန်လည်ဆန်းသစ် ပြုပြင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သည့် အသစ်တဖန် ပြန်လည် မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ထားသော ဟိုတယ်၏ MiCasa Restaurant & Bar တွင်လည်း ဧည့်သည်တော်များ အတွက် အမျိုးအစား အလျှံအပယ် ပါဝင်သည့် မနက်စာဘူဖေးမှအစ ညနေခင်း ကော့တေးလ် အစုံ အပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အရသာအမျိုးမျိုးကို ခံစားသုံးဆောင်နိုင်မည့် à la carte selection ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရေကူးကန်ကို လှမ်းမြင်နေရအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ထိုစားသောက်ဆိုင်တွင် ဧည့်သည် အရေအတွက် (၂၀၀)ခန့် နားနားနေနေ အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်ပြီး ရေကူးကန်ကျယ်ကြီး ကို ငေးကြည့်ရင်း စားသောက်ခံစား ပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည်။ အစည်းအဝေးပွဲများ၊ကော့တေးလ် ပါတီများ၊ ညီလာခံများနှင့် မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားများအတွက်လည်း ဧည့်သည်(၂၁၀) ခန့်ကို တည်ခင်း ဧည့်ခံရန် ကျယ်ဝန်းသော ခန်းမကြီးများလည်း ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အမြဲတစေ ခရီးသွားလာနေရသော စီးပွားရေး သမားများအတွက်လည်း တစ်ဦးထည်းထိုင်ခုံမှစ၍ လူဦးရေ(၆)ဦးအထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး နာရီအလိုက် (သို့မဟုတ်) လအလိုက် ငှားရမ်း၍ အသုံးပြုနိုင်သော ‘Ready to Work’ လုပ်ငန်းခွင် နေရာလေးများကို လည်း ဖွဲ့စည်းပေးထားပါသည်။
စိတ်ပင်ပန်းမှုများကို ဖြေဖျောက်ရန်နှင့် အားအင်သစ်များ ပြန်လည်ရရှိရန် ဟိုတယ်၏ Sweat Club ဟု အမည်ရသော အားကစားခန်းမတွင်လည်း နောက်ဆုံးပေါ် လေ့ကျင့်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်နေ့စဉ် အေရိုးဗစ်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါသည်။ ညနေပိုင်းတွင်ဆိုလျှင်လည်း ရှုပ်ထွေးဆူညံသော မြို့ပြအငွေ့အသက်များမှ ခွဲထွက်ပြီး စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် အနက် (၂၁) မီတာရှိသော ရေကူးကန်တစ်ကန်၊ ရွေးချယ်စရာ အမြည်းနှင့် ကော့တေးလ်အမျိုးမျိုး ခင်းကျင်းထား သော အဖျော်ယမကာ ဘားပါဝင်သည့် ရေကူးကန်များတွင်လည်း စိတ်အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်ပါသည်။ ကလေးထိန်း ဝန်ဆောင်မှုက ည်းပံ့ပိုးပေးထားသည့်အတွက် အပန်းဖြေလာရောက် တည်းခိုကြသော ကလေးငယ်လေးများတစ်ဖက်နှင့်မိသားစုများအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါသည်။
“ရန်ကုန်မြို့မှာအခြေပြုပြီး အခုလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး Mercure ဟိုတယ်အဖြစ် အောင်အောင်မြင်မြင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အသိအမှတ်ပြု ခံထားရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု အနေနဲ့ Mercure ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး ယဉ်ကျေးမှု၊ သဘောတရားတွေ နဲ့အညီ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်တွင်း ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်မှု အတွေ့အကြုံတွေက ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ အကောင်းဆုံး ဝေမျှသွားမှာပါ” ဟု Mercure Yangon Kaba Aye ၏ အထွေထွေ မန်နေဂျာဖြစ်သူ ရစ်ချက်တင်ထွန်း မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ရန်ကုန်မြို့တော်အတွက် ဟိုတယ်နှင့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာ အဆင့်အတန်းအသစ်တစ်ခုကို Mercure က သတ်မှတ် ပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပျော်အပန်းဖြေ ခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဧည့်သည်တွေ အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးရှိတဲ့ ဒီဟိုတယ်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရရှိပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ရရှိခံစားရမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့မှစတင်၍ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သော Mercure Yangon Kaba Aye ဟိုတယ်အပါအဝင် MGallery, The Lake Garden Nay Pyi Taw, Novotel Inle Lake Myat Min, Novotel Yangon Max, Ibis Styles Yangon Stadium နှင့် Sofitel Inle Lake Myat Min စသည်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်ကြီး(၆)ခုကို AccorHotels မှ အောင်မြင်စွာ စီမံကွပ်ကဲလျက်ရှိပါသည်။
Mercure Yangon Kaba Aye ဟိုတယ်သည် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးမှ (၁၀) ကီလို မီတာခန့်အကွာ၊ နာမည်ကျော် မြန်မာပလာဇာ ရှော့ပင်းစင်တာနားတွင် တည်ရှိပြီး အဓိကဗဟို အချက် အချာကျ စီးပွားရေး ဧရိယာနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များကို အဓိကဆွဲဆောင်ရာ အထင်ကရာ ဧရိယာ တွင် ခမ်းနားစွာ တည်ရှိပါသည်။
Mercure Yangon Kaba Aye အကြောင်း အချက်အလက် အသေးစိတ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကပိုမိုသိရှိ လိုပါက http://www.mercureyangonkabaaye.com တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Mercure နှင့်အတူ AccorHotels မှ တမူထူးခြားပြီး ပြည်တွင်းအနှစ်သာရများပေါင်းစပ်ထားသော ဟိုတယ်များကို ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Mercure Yangon Kaba Aye အကြောင်း
Mercure သည် ခိုင်မာသော နိုင်ငံတကာ လူမှုကွန်ယက် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အရည်အသွေး ကတိကဝတ်များကို န ်ငံတွင်း လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အမြစ်တွယ်နေသော ဟိုတယ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကြယ်(၄)ပွင့်အဆင့်ရှိ ရန်ကုန်မြို့၏ တစ်ခုတည်းသော အလယ်အလတ်တန်းစား ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာမှ Mercure ဟိုတယ်များကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှ စိတ်အားထက်သန်သော ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲရေး ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးသမားများနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများမှ စီမံခန့်ခွဲ ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း (၆၁) နိုင်ငံတွင် ဟိုတယ်အရေအတွက်ပေါင်း (၇၇၉)ခု ဖြန့်ကျက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းဟိုတယ်များ အားလုံးသည် မြို့တော်ကြီးများ၏ အချက်အချာအလယ်ဗဟိုဧရိယာ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသနှင့် တောင်တန်းဒေသများတွင် လှပခမ်းနားစွာဆောက်လုပ်ထားပါသည်။
Mercure သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ခရီးသွားနှင့် လူနေမှုပုံစံ ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲ ရေး အဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာတစ်လွှား မှ အကောင်းဆုံး၊ အခမ်းနားဆုံး သီးသန့်အိမ်ရာပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ကျော်၊ ဟိုတယ်ပေါင်း(၄,၃၀၀)ကျော်၊ အပန်းဖြေ resort များနှင့် လူနေအိမ်ရာများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ သာလွန်ကောင်းမွန်သော အတွေ့ အကြုံများ ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိသော စွန့်ဦးတီထွင်အဖွဲ့ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
AccorHotelsHotelHotelChainLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMercureMercure Yangon Kaba AyeMyanmarMyanmar PR AgencyPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaTourismYangon
Previous Previous post: Vivo Unveils the all-new ‘V9’ AI-Powered FullView™ Display Smartphone to Myanmar
Next Next post: Harvey Law Group appointed as official Southeast Asia’s representative firm for Range Development’s latest branded pool villa resort expansion